Fitaovana famokarana | Sichuan Mingtaishun Cemented Carbide Co., Ltd.
Izy io dia mandray spindle servo drive magnet permanen, rafitra mifanohitra amin'ny tsanganana, interface interface spkle HSK, mampiasa fifandraisana taper sy fiaramanidina, tsy misy hovitrovitra, afaka mitazona tsela tsy miovaova amin'ny halavan'ny hafainganam-pandeha rehetra, manome antoka ny fahamarinan-toerana haingam-pandeha sy ny fikolokoloana henjana, ny fanaraha-maso ny rafitra eo aloha sy aoriana, Mahomby , manan-tsaina, mahomby ary tsotra ampiasaina. Fanodinana batch an'ny mpikapa fanodinana mahazatra, mpikapa baolina, mpikapa orona boribory ary fitaovana hafa feno
DEKEP Grinder axis an'ny CNC axis dimy
Ny lafaoro fanerena fanerena ambany dia mifanaraka amin'ny fiasa marobe toy ny dewaxing, ny fantsom-bovoka, ny faneren'ny tsindry ambany, ny fanodinana tsindry ambany ary ny fanovana ny rivotra iainana. Ampiasaina indrindra izy io ho an'ny fanodinam-bidy ambany ny vokatra voapotsitra, ny fanodinana tsindry ambany ny vokatra sinter ary ny fanodikodinan'ny karbaona ny vokatra voaporitra. Ny tena fiasan'ny sinteria ambany fanerena dia ny fampihenana ny mason-koditra mikraoba amin'ny karbida simenitra. Ny pore ao amin'ny vatana voadio dia nesorina nandritra ny dingana fanesorana banga. Ny dingana manery dia ny fanafoanana ny mason-koditra mikraoskaopy.
Ny vahaolana amin'ny zoller sy ny refy 4.0 dia manampy anao hiomana amin'ny hoavin'ny orinasa manan-tsaina. Manomboka amin'ny fikarohana ny fitaovana miditra ka hatramin'ny fanodinana ka hatramin'ny famitana vokatra efa vita ...
Lafaoro fanivanana ambany fanerena
Lafaoro fandefasana rivotra
Ny fanafanana ao anatin'ny fantsom-bovoka, ny fantsom-bava ary ny fanasivanana dia manampy amin'ny fanesorana ireo loto, manatsara ny fahadiovan'ny atmosfera manivana, manatsara ny fahamendrehan'ny fehezam-binder ary mampiroborobo ny fihetsika. Nandritra ny dingan'ny fanodinana sivana manontolo, ny vatan'ny voaova dia matevina ka tsy misy porosika intsony, ary andiana fiatraikany ara-batana sy simika ary fanitsiana ny rafitra no vokarina, ary farany misy karbida simenitra matevina miaraka amina singa simika, toetra ara-batana sy ara-mekanika, ary
Fitaovana fandrefesana sary fitaovana
Rehefa mandrefy, ny fitaovana fandrefesana sary dia manitsy sy mandrefy ilay fitaovana amin'ny lafiny roa. Izy io dia afaka mahatsapa ny fandrefesana ny axis X, ny axis Y, ny axis Z, ny axis fihodinan'ny lens, ary ny fihodinan'ny fitaovana amin'ny clamping iray, izay ialana amin'ireo famaky marobe. Ho an'ny lesoka namboarina nandritra ny clamping faharoa, ny fihenam-bidy mihodina avo lenta dia ampiasaina amin'ny solomaso roa, izay manamora ny fandrefesana. Ny savaivony, ny halavany, ny elanelan'ny fanapahana, ny zoro amin'ny zoro, ny zoro miverina ary ny zoro helix amin'ilay fitaovana dia azo tanterahina amin'ny clamping iray. Ny fandrefesana marina ny refy isan-karazany toy ny zoro fihenam-bidy lehibe sy ny zoro fihodinana faharoa